Waa maxay Elafibranor (GFT505)?
Budada Elafibranor (GFT505)923978-27-2), waa daawo tijaabo ah oo cilmi baaristeeda wali socota. Caadi ahaan, daraasaddeeda iyo horumarinteeda Genfit waxay ku saleysan tahay waxtarka Elafibranor (GFT505)) budo (923978-27-2) ee lagula dagaallamayo cudurrada sida cudurka beerka ee aan dufanka lahayn, dyslipidemia, insulin iska caabbinta, iyo sokorowga.
Elafibranor (GFT505) habka ficil
Budada 'Elafibranor (GFT505) waa daawo afka laga qaato oo ka shaqeysa saddexda nooc ee' PPAR '. Waxay ka mid yihiin PPARa, PPARd, iyo PPARg. Si kastaba ha noqotee, badanaa waxay ku shaqaysaa PPARa.
Farsamaynta Elafibranor ee ficilku waa mid cakiran maadaama ay si kala duwan u shaqaalaysiiso cofactors-ka soo-dhoweynta nukliyeerka. Natiijo ahaan, tani waxay u horseeddaa kala-duwanaanta kala-duwanaanta hiddo-wadaha iyo sidoo kale saameynta nafleyda.
Budada Elafibranor (GFT505) waxay awood u leedahay inay aqoonsato oo ay soo bandhigto waxqabadka xayeysiiyaha nukliyeerka xulashada (SNuRMs). Natiija ahaan, waxay bixisaa waxtarka la hagaajiyay iyada oo la yareynayo dhibaatooyinka soo raaca.
Labada nooc ee moodeel iyo milkileyaashuba waxay caddeeyeen inay waxtar u leeyihiin la dagaallanka xaaladaha kala duwan. Waxaa ka mid ah iska caabbinta insulinta iyo sonkorowga, caabuqa, buurnaanta, iyo burooyinka lipid, ee lagu garto kororka HDL kolesteroolka iyo hoos u dhigidda kolestaroolka LDL iyo triglycerides.
Farqiga u dhexeeya habka ficil ee Elafibranor iyo kan xeryahooda kale ee bartilmaameedsanaya PPARs ee NASH (nonalcoholic steatohepatitis) waa xaqiiqda inaysan soo bandhigin waxqabadyada dawada ee PPARy.
Natiijo ahaan, Elafibranor isticmaaleyaashu ma la kulmaan waxyeellooyin aan loo baahnayn oo la xidhiidha dhaqdhaqaaqa PPARy. Waxyeelooyinka noocaas ah waxaa ka mid ah; haynta dareeraha, bararka bararka, iyo miisaanka oo kordha dhamaan kuwaas oo kordhiya halista qofka qaba dhibaatada wadne xanuunka.
Elafibranor (GFT505) ee daraasada daaweynta Nash
NASH (nonalcoholic steatohepatitis) waa cudur ku dhaca beerka kaas oo keena caabuq iyo xumaanshaha hepatocytes iyo sidoo kale dufanka isku urursan oo sidoo kale loo yaqaan dhibcaha xaydhka. Caadi ahaan, xaaladaha caafimaad qaarkood sida cilladda dheef-shiid kiimikaadka, nooca sonkorowga 2, iyo cayilku waa sababta ugu horreysa ee keenta steatohepatitis nonalcoholic (NASH), iyo cudur beerka dufanka aan dufan lahayn (NAFLD).
Maanta, dad badan ayaa la silicaya cudurkan dilaaga ah. Qaybta cabsida leh ee ku saabsan waxay tahay inay u horseedi karto cirrhosis, xaalad ka dhigaysa inuu beerku shaqeyn kari waayo. Waxay sidoo kale u horseedi kartaa kansarka beerka mararka qaarkoodna, dhimasho.
Warka murugada leh ee ku saabsan NASH (nonalcoholic steatohepatitis) ayaa ah inuusan dooran da'da oo uu sii wado inuu qof walba saameeyo. Kaba sii darane, calaamadaha cudurku waxay noqon karaan astaamo, oo qofku ma ogaan karo weligiis inay la xanuunsanayaan cudurka illaa uu u gudbo marxalad dambe.
Nabarrada iyo nabarrada ay keentay NASH (steatohepatitis nonalcoholic) sidoo kale waxay u horseedi kartaa dhibaatooyinka wadnaha iyo sambabaha. Iyada oo dad badan ay hadda la xanuunsanayaan xaaladan oo ka soo bilaabatay cudurka beerka dufanka leh ee aan dufan lahayn, cilmi baarayaashu waxay raadinayaan xulashooyin daaweyn oo aan ahayn beerka laga beddelayo.
Mid ka mid ah daawooyinka loo bartay daweynta NASH waa Elafibranor (GFT505) budada (923978-27-2). Ilaa iyo hadda, waxay muujisay inay u horseedayso saameyn togan labada astaamood ee ugu weyn ee cudurka, sida, buufinta iyo caabuqa. Quruxda ay leedahay ayaa ah in ay tahay mid aad loo adkeysan karo oo ay dhif u horseedi doonto in qofku uu ku xanuunsado waxyeellooyin kasta. Waa sababtaas awgeed Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Mareykanku wuxuu si dhakhso leh ugu magacaabayaa dawadan daroogo Daaweynta NASH.
Waqtigaan la joogo, budada 'Elafibranor (GFT505) waxay ku jirtaa wajiga 3 ee tijaabada caafimaadka, sidoo kale loogu magac daray XALKA IT.
Waa daraasad caalami ah oo bilaabatay rubacii koowaad ee 2016, taas oo la kala soocay, xakamaynta placebo ee saamiga 2: 1 iyo laba-indhoole. Bukaannada ku lug leh daraasaddan ayaa ah kuwa ka cabanaya NASH (NAS> = 4) iyo fibrosis (marxaladaha F2 ama F3 oo waxyeelada beerka horayba loo ogaan karo. 505mg ama placebo hal mar maalintii.
Kunka bukaan ee ugu horeeya ee la qoro waxay gacan ka geysan doonaan muujinta haddii NASH lagu daaweyn karo Elafibranor (GFT505) iyada oo aan laga sii darin fibrosis marka la barbardhigo kuwa lagu daaweeyo placebo.
Kooxda koowaad ayaa la diiwaangeliyay Abriil 2018, iyo falanqaynta natiijooyinka waxaa la soo sheegi doonaa dhammaadka 2019. Xogta la soo gudbiyay ayaa go'aan ka gaari doonta bal in Elafibranor uu oggolaado Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Mareykanka maadaama ay oggolaansho shuruudi ku heleyso Wakaaladda Daaweynta Yurub, si fiican. oo loo yaqaan EMA illaa 2020.
Daraasadu waxay horey u martay talaabo ah Bishii Diisambar 2018 markii Gudiga Dabagalka Badbaadada Xogta (DSMB) ay meel mariyeen sii wadida tijaabada iyadoo aan wax laga badalin. Taasi waxay ahayd kadib dib-u-eegis hore loo qorsheeyay oo ku saabsan xogta amniga la sameeyay soddon bilood kadib.
Natiijooyinka daraasadihii hore iyo daraasadaha kiliinikada ee daaweynta NASH
Waxtarka iyo badbaadada 'Elafibranor' ee daaweynta NASH ayaa hore loo qiimeeyay iyada oo loo marayo qaabab badan oo cuduro ah. 5 wajiga 2a, tijaabooyin kala duwan ayaa lagu sameeyay dad kala duwan oo bukaan ah oo la il daran cudurka dheef-shiid kiimikaadka. Waxaa ku jiray kuwa qaba nooca sonkorowga 2 ama kaadi-macaan pre-iyo atherogenic dyslipidemia. Intii lagu guda jiray daraasadda, waxaa la arkay in Elafibranor uu kor u qaaday;
Hoos u dhigista halista dhibaatooyinka wadnaha iyo xididada
Astaamaha hoos loo dhigay ee dhaawaca beerka
Kordhinta dareenka insulinta
Profile-ka laf-dhabarka wadnaha.
Tijaabada wejiga 2b ee la bilaabay 2012 wuxuu ahaa tijaabadii ugu weyneyd ee faragelinta iyo daraasad caalami ah oo rasmi ah oo ugu horeysa oo lagu sameeyo NASH. Waa markaa markaa in Elafibranor uu gaadhay FDA oo ku taliyay in loo eego mawduuca 'Xallinta NASH iyada oo aan laga sii xumaan Fibros. "Taasi waxay ahayd aasaaska aasaasiga ah ee wejiga 3aad ee tijaabada oo wali socota.
Waxaa la arkay in bukaanada helay daaweynta NASH ee Elafibranor ay xusayaan hagaajinta calaamadaha cilladaha beerka sida ALP, GGT, iyo ALT. Iyadoo loo marayo qiimeynta dhibcaha labaad, waxaa jiray indho indheyn ku saabsan in qiyaasta Elafibranor (GFT505) ee qiyaasta 120mg ay siisay saameyn daaweyn ah oo ku saabsan arrimaha halista wadnaha iyo wadnaha ee la xiriira NASH, Waxayna ka mid ahaayeen;
Horumar dhanka dareenka insulinta iyo dheef-shiid kiimikaadka gulukooska ee bukaannada sonkorow qaba
Hagaajinta heerarka lipoproteins iyo libidska plasma.
Waxtarka ay leedahay Elafibranor ee daaweynta NASH
Heerka carruurtu ay ka cabanayaan cayilka ayaa si weyn kor ugu kacay, taasoo ka dhigaysa walaac caafimaad oo isa soo taraya. Daraasad la sameeyay sanadkii 2016, ayaa lagu arkay taas NAFLD(cudurka beerka dufanka aan dufan lahayn) wuxuu ku dhacaa qiyaastii 10-20% dadka carruurta ah. Waxay sii muujisay in NAFLD-da caruurtu ay noqon doonto sababta ugu weyn ee keenta shaqo gabista beerka, cudurada beerka, iyo sidoo kale beeritaanka beerka ee caruurta iyo dhalinyarada.
Bishii Janaayo 2018 waxaa si rasmi ah loo bilaabay barnaamijka NASH ee caafimaadka caruurta iyadoo maskaxda lagu hayo in Elafibranor uu yahay daawada kaliya ee la xaqiijiyay inay wax ku ool u tahay daaweynta NASH ee dadka qaangaarka ah waxayna ku jirtaa marxaladda horumarinta ee daaweynta carruurta.
Miyaa Ellafibranor lala istcimaali karaa dawooyinka kale ee daaweynta NASH?
Horeba way cadahay in Elafibranor uu wax ku ool u yahay daaweynta NASH markii keligiis la isticmaalo. Si kastaba ha noqotee, kakanaanta jirrada darteed, waxaa loo wada isticmaali karaa daawooyinka kale ee maareynta beerka fibrosis, NASH, iyo cuduro la-jirkooda.
Elafibranor (GFT505) adeegyo kale
Daaweynta cudurka cholstasis
Cudurka 'Cholestasis' waa xaalad ay keento naafonimo ku timaadda samayska xameetida iyo qulqulka xameetida iyo duodenum. Waxay u horseedi kartaa sii xumeynta cudurka nidaamka jirrada iyo cudurka beerka, beerka oo howlgab noqda, iyo xitaa baahida loo qabo beerka ku tallaalidda. Daraasad caafimaad oo la sameeyay ayaa muujisay in budada 'Elafibranor (GFT505)' ay yareyneyso astaamaha bayoolajiyeed ee ku jira plasma sidaa darteedna ay cadeyneyso inay faa'iido u yeelan karto daaweynta cudurka cholestasis.
Sonkorowgu waa xaalad ay keento sonkor aad u badan ama gulukoosta dhiigga. Wuxuu saameeyaa ku dhawaad ​​afar boqol oo milyan oo dad ah adduun weynaha. Mid ayaa ku dhaca nooca 2aad ee kaadi macaanka mar haddii jirkooda uusan awoodin inuu soo saaro oo isticmaalo insulin caadi ahaan.
Cilmi baaris lagu sameeyay elafibranor waxay muujineysaa inay yareyneyso horumarka nooca 2aad ee sonkorowga laba siyaabood. Midka hore waa iyada oo la wanaajiyo dheef-shiid kiimikaadka jirka ku jira.
Waxay kaloo wanaajisaa dareenka insulinta ee muruqyada iyo unugyada wareega.
Daraasadda Elafibranor waxay u tahay bishaaro wanaagsan qofkasta oo ka cabanaya NASH. Ka dib markii afka laga siiyay in ka badan sideed boqol oo bukaan ah ilaa iyo maanta oo muujinaya in ay waxtar leedahay, waxaa jirta rajo ah in dadku aysan mar dambe mari doonin beerka xubin laga beddelayo.
Waxaa jiray maya Is-dhexgalka daroogada Elafibranor lagu ogaadaa sitagliptin, simvastatin, ama warfarin, taas oo muujineysa in si wadajir ah loogu isticmaali karo daawooyinka kale. Elafibranor sifiican ayaa loogu dulqaadan karaa jirka mana muujinayo wax saameyn ah.
Qaababka Cilmi-baarista Tarjumida ee Sonkorowga, Cayilka, iyo Nonalcoholic Fatty, oo uu tafatiray Andrew J. Krentz, Christian Weyer, Marcus Hompesch, Springer Nature, bogga 261
PPARs ee Taleefannada Gacanta iyo - Dhamaan Jirka Tamarta Jirka (Energy Energy Metabolism) oo uu daabacay Walter Wahli, Rachel Tee, 457-470
Cayilnaanta iyo Cilladaha Caloosha ku dhaca, Arrin ku saabsan Isbitaalka Bukaan-jiifka Waqooyiga, Octavia Pickett-Blakely, Linda A. Lee, bogga 1414-1420
1.Waa maxay Elafibranor (GFT505)?
2.Elafibranor (GFT505) farsamaynta waxqabadka
3.Elafibranor (GFT505) ee daraasadda daaweynta Nash
5.Natiijooyinka ka soo baxay daraasadihii hore ee caafimaadka iyo caafimaadka ee daaweynta NASH
6. Waxtarka Elafibranor ee daaweynta NASH
7.Can Elafibranor ma lala isticmaali karaa dawooyinka kale ee daaweynta NASH?
8.Elafibranor (GFT505) adeegsi kale